Zọpụta Ụfọdụ Euro ma na-a ụgbọ okporo ígwè na Travel Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Zọpụta Ụfọdụ Euro ma na-a ụgbọ okporo ígwè na Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 03/07/2020)
Kemgbe 10 afọ, ọtụtụ nde mmadụ chere na otú bara uru ọ bụ na-a ụgbọ okporo ígwè! Rich ubi nke greenery, sachaa coastlines na pristine ugwu kpụkọtara ọnụ that are never mentioned in travel brochures or blogs. Ewere ụgbọ okporo ígwè bụ a fun, adaba na a obere akpa-enyi na enyi ụzọ si ebe A na-ezo B, n'ihi ya, anaghị eche echiche ugboro abụọ, na-ụgbọ okporo!
Ihe nke abuo banyere ụgbọ oloko na Europe na n’ozuzu bu etu ha si enwe mmekorita ego. Ọ bụghị naanị na e ji enwe ọtụtụ ọnụ ala ebe ịhọrọ site na, kamakwa ọtụtụ ụzọ ibelata n'ozuzu njem mmefu. Ya mere ọ bụrụ na ị na-agụ see ụgbọ okporo ígwè mgbe anya, ebe a bụ ole na ole oké Atụmatụ iji:
Were Ụfọdụ Time na-eme Research na Planning tupu gị na ụgbọ
Ọtụtụ ikpe mgbe ị na-a ụgbọ okporo ígwè, ị pụrụ ime ka ọtụtụ ihe na tiketi(s) na a ngwa ngwa online search. Akwụkwọ gị tiketi n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na o kwere omume. Lelee ihe oge nke afọ tiketi ahịa na-kasị ala, ma hụ na ị na-na na na-ele anya maka ndị discounts. na-emekarị, mba ọ bụla ga-enwe ụdị ụfọdụ nke dị ọnụ ala karịa nhọrọ dị maka tiketi zuo. Ya mere, ime gị research! Gụọ site na nke a blog na-ọzọ maara na dị iche iche nhọrọ.
Mgbe ị na-a Train, Travel site Night
Ma ị na nwata akwụkwọ hụrụ onwe ya n’anya ma ọ bụ a mgbe njem na-ụgbọ okporo ígwè na kwa ụbọchị, na-ehi ụra na a ụgbọ okporo ígwè nwere ike nwere ike igbutu ego nọrọ na ulo fọrọ nke nta na ọkara. Ọ bụ ihe ịrịba ụzọ zọpụta oge oke dị ka ị na-ada n'ụra na otu obodo na-eteta ọzọ. Ebe ahụ kwuru na, ọ dị mkpa ịghọta na iche iche nke abalị ụgbọ okporo ígwè ụlọ.
The kacha mma bụ ụgbọ oloko na-compartments. The oche nwere ike wetara ọnụ mgbe ị na-a ụgbọ okporo ígwè na-etolite a bed tinyere a ákwà mgbochi maka nzuzo. Next bụ couchettes, ndị dị ọnụ ala na ọtụtụ zuru ebe nile nhọrọ. Ndị a ụlọ anọ isii bunks na ndị unisex, otú i nwere àjà nzuzo gị a bit. The ndị ikpeazụ, ndị kasị oké ọnụ nhọrọ bụ sleeper. Nke a na otu onye bụ nnọọ ihe ọma na nzuzo, niile nke nhọrọ ndị ka dị ọnụ ala karịa a hotel ụlọ.
Copenhagen na Vienna Ụgbọ oloko
Zọpụta na Food na-aba n'Anya na Were A Train
Mbukota gị onwe gị nri dị nnọọ ọnụ ala ụzọ na-aga banyere ya. N'adịghị ka njem mgbe nile bọs ma ọ bụ ụgbọ ala, mgbe ị na-a ụgbọ okporo ígwè i nwere ike na-eri comfortably. Kasị oche nwere a esiri-esi table ma ọ bụ a ofu table n'etiti abụọ oche. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na i nwere na- ịzụta nri gị na-aba n'anya na n'oge gị njem, na dị mma. A nri na ụgbọ okporo ígwè bụ gabiga ókè pricey na ị pụrụ mgbe mgbe na-etinye maka kaadị na-enye ego.
Bordeaux ka Nantes Ụgbọ oloko
Paris na Nantes Ụgbọ oloko
Lyon ka Nantes Ụgbọ oloko
Marseilles ka Nantes Ụgbọ oloko
Eme atụmatụ maka njem gị site ụgbọ okporo nwere ike inyere gị aka ime ọtụtụ ihe na njem gị enweta ego! Ịchọta ezi njikọ pụrụ mgbe mgbe ọnụ ala karịa akụta a ụgbọelu, na ihe ọma karịa njem site ụgbọ ala. Were a ụgbọ okporo ígwè a ahụmahụ pụrụ iche na ga-eme ka gị dum ezumike!
Were A Train ka Zọpụta-A-Train, họrọ gị ebe na-okporo ígwè na fọrọ n'ebe ọ bụla na Europe na ndị kasị oké ọnụ ahịa na ahịa! na, maa amụma? Mgbe ị na-ụgbọ oloko gị tiketi na Save A Train, The ntinye akwụkwọ usoro a na-eme n'ime 3 nkeji, ka abịa akpa gị ma na-enwe ihe niile na-eso!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/take-train-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / nl ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.
#nighttrain #traveleurope ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ traveltips
5 Top Atụmatụ N'ihi Brisbane Site Train